Devanagari Newsबाबा त्यो दिन त बिर्सनु भएको छैन नि है ? — Devanagari News
बाबा त्यो दिन त बिर्सनु भएको छैन नि है ?
कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? तपाई पनि एकदिन बाबा बन्नुहुनेछ । तपाईंका छोराछोरी पनि तपाईंसँग बोल्ने छैनन् । सिर्फ सोसल मिडियामा तपाईंको फोटोको माथि लेख्नेछन् – ह्याप्पि फादर्स डे बाबा । कमेन्टभरी तपाईंलाई पनि शुभकामना आउनेछन् । छोराछोरीको पोष्ट हेर्न भ्याउनु भयो भने तपाईंलाई केही मात्रामा खुशी लाग्नेछ । नत्र भने तपाईं आफ्नो दुनियाँमा मस्त तपाईंको छोराछोरी आफ्नो संसारमा मस्त ।
अहो ! मस्त नै मस्त । मैले केही समय भविष्यतर्फ उडान भरेको मात्र हुँ । लामो समय कल्पनामा रमाउनु पनि राम्रो होइन किनभने कल्पनामा रमाउन बानी पर्‍यो भने वास्तविकताबाट मान्छे भाग्ने सम्भावना बढ्दो रहेछ । त्यसैले धेरै समय नखर्चेर सिधै वास्तविकतामा तर्फ प्रस्थान गरौं ।
के हामीले यस्तै गरिरहेका छैनौं र ? बाबा सँग कुरा गर्न हामीलाई एकपटक फुर्सद छ ? महिनाको कतिपटक बाबासँग कुरा गरिन्छ होला ? धेरैको गोजी रित्तिएपछि र समस्याले टाउको दुखाएपछि मात्र फोन डायल गर्ने बानी हुन्छ ।
आशा गर्छु- त्यो छोराछोरीभित्र तपाईं पर्नु हुँदैन । उमेरले जति पाको भए पनि हरेक दुःखमा बाबाको मात्र याद आउँछ । अनि बचपनमा जे जस्तो कारणले आँखाबाट आँसु खस्यो भने पनि मेरो बाबाले सबथोक ठिक पारिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ ।
हरेक छोराछोरीको बचपनमा एउटा यस्तो आत्मविश्वासले जरा गाडेर बसेको हुन्छ, यदि कोही भगवानलाई पनि टक्कर दिने मान्छे यो पृथ्वीमा बस्छ भने उहाँ मेरो बाबा हुनुहुन्छ । उमेर बढेसँगै छोराछोरीको मांसपेशीहरू तन्किन्छन् भने बाबाको मांसपेशीहरू खुम्चँदै जान्छन् ।
एउटा उमेरमा पुगिसकेपछि, त्यही बाबा आफूभन्दा कमजोर, केही पनि नजान्ने लाग्छ । जुन छोराछोरी बचपनमा बाबाले भनेका हरेक कुराहरू एक एक सेकेण्ड पनि ध्यान दिएर घण्टौं सुन्न सक्थे । अचेल उही बाबाको मुखारविन्दुबाट एउटा शब्द नखस्दै हामीलाई प्रतिक्रिया दिन हतार हुन्छ ।
मेरो बाबा बचपनमा मलाई कथा सुनाउनु हुन्थ्यो । बाबाले बचपनमा सुनाएको एउटा यस्तो कथा छ जुन मेरो मानसपटलबाट कहिल्यै हराउँदैन । जति जति बेला बाबासँग मेरो कुरा हुन्छ । म यही कथा सम्झन्छु । सम्झिरहन्छु ।
गर्मी याम थियो । गाउँतिर गर्मी याममा आँगनमा सुत्ने गर्छन् । खाना खाइसकेर आँगनमा बिछ्याएको गुन्द्रीमा पल्टिरहेको थिएँ । बाबा खाना खाइसकेर आउनुभयो । म जसरी पल्टिरहेको थिएँ, त्यसरी नै पल्टिनु भयो । एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा राखेर ।
आकाशमा देखिएको चन्द्रमाको वरवरदेखि परपरसम्मका ताराहरूलाई हेर्दै थिएँ । बाबाले बिस्तारै भन्नुभयो- ‘आदर्श आज कथा सुन्ने होइन ?’
बाबा अहिले आफू मात्र बोल्न चाहँदैनन् । उनी छोराका हरेक शब्दहरू सुन्न चाहन्छन् । बाबा भनेर बोल्न सुरु गरेको छोराको वर्णमाला बढेर कुन शब्दसम्म पुग्यो होला, त्यो सुन्न चाहन्छन्
बाबाले यति भनेर सक्दा नसक्दै म बाबातिर फर्किसकेको थिएँ । बाबाले सुरु गर्नुभयो ।
एउटा गाउँमा हाम्रो जस्तै परिवार थियो । तिमी र म जस्तै बाबा र छोरा पनि थिए । छोरा सानै थियो । बाबाले छोरालाई काँधमा हालेर नयाँ नयाँ ठाउँमा घुमाउन लैजानुहुन्थ्यो । जति जति नयाँ नयाँ कुराहरू देखिन्थे ।
तिनी सबैको बारेमा छोरा सोध्थ्यो- बाबा यो के हो ? त्यो के हो ? कत्ति पनि अप्ठ्यारो महसुस नगरेर बाबा तिनी सबै वस्तुको बारेमा छोराले बुझ्ने गरी भन्थे । यसरी नै छोरा आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म उसको यात्रामा आएका हरेक बुझिनेदेखि नबुझिने समस्याको समाधान बनेर बाबाले साथ दिए । उनले कहिल्यै आफ्नो परवाह गरेनन् । आफ्नो सम्पूर्ण जीवन छोराको पालनपोषण गर्नमा व्यतित गरिदिए । बाबाले कथा भनेर सकिसकेपछि मलाई त्यो रात अबेरसम्म पटक्कै निन्द्रा लागेन ।
अहिले पनि बाबालाई त्यसरी नै आफ्नो छोरासँग घण्टौं गफ्फिन मन छ । बाबा अहिले आफू मात्र बोल्न चाहँदैनन् । उनी छोराका हरेक शब्दहरू सुन्न चाहन्छन् ।
बाबा भनेर बोल्न सुरु गरेको छोराको वर्णमाला बढेर कुन शब्दसम्म पुग्यो होला, त्यो सुन्न चाहन्छन् । एकपटक फेरि बचपनलाई कथा जसरी भन्न चाहन्छन् । तिमी जन्मेर मात्र यस्तो भएको होइनौं । तिमी बन्नमा कयौं वर्ष जाग्नु परेको छ । यो सम्झाउन चाहन्छन् । तिमी यो अवस्थासम्म आईपुग्न मृत्यलाई पनि मैले धेरैपटक जितेको छु ।
यो वास्तविकता सुनाउन चाहन्छन् ।
वास्तवमा मानव जीवन सकियो जस्तो छ । अब सोसियल जीवन सुरु भयो । सोसियल अर्थात् सामाजिक सञ्जालको जीवन । एकदुई वटा पुराना फोटाहरू ग्यालरीबाट निस्कँदै सामाजिक सञ्जालको भित्तामा टाँसिन पुग्छन् । अनि टाँस्नेले अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । कति जनाले लाइक गर्लान् ? कति जनाले कमेन्ट गर्लान् ? बाबातर्फ ध्यान जाने कुरा त भएन, फोटोतर्फ अलि अलि ध्यान जाला तर लाईक र कमेन्टतर्फ अलि बेसी ध्यान जानेछ ।
यो मेरो अनुमान हो । बाबालाई औधी माया गर्ने छोराछोरी पनि छन् । उनीहरूको लागि हो यो दिन । बाबासँग आत्मिय सम्बन्ध नराख्ने, रगतको सम्बन्ध छ भन्दैमा यो हृदयबाट दिइने शुभकामनालाई सामाजिक सञ्जालको भित्तामा सीमित राख्नुभएन नी होइन र ?
सम्बन्ध दिलबाट निभाइन्छ । उही बाबाले सिकाउनु भएको होइन ? बाबाको फोटो कति जनाले मनपराउँछन् ? यो विषय नै होइन । म मेरो बाबालाई कति माया गर्छु । कति केयर गर्छु । यिनी मेरो प्राथमिकताका विषय हुन् ।
बाबा म हजुरलाई एकदिन मात्र माया गर्न चाहन्नँ । दिनानुदिन हजुरको आर्शीवादले चलायमान हुन चाहन्छु । ‘आइ लभ यू बाबा ।’ बाबाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना । धेरै माया !
साक्षरता अर्थात् संसारसँगै आफैंलाई हेर्ने आँखा
कहिल्यै भुल्नै नसकिने ती दर खाने दिनहरू
समाजवादको बहसमा एमाले दोस्रो पुस्ताको भूमिका
‘हृयाप्पी बर्थ डे टु यु’ लेख्नेहरूको नाममा
गोकर्णेश्वरमा बुवाको सम्झना (फोटो फिचर)